I-China Fashion ibhegi yesikhumba se-cosmetic ye-cosmetic ye-makeup case kunye nomqheba we-wristlet kunye nokuvalwa kwe-zipper flat esezantsi yokumisa umququzeleli ibhegi enkulu umthamo wabafazi ababhinqileyo Abavelisi kunye nababoneleli | Camei Ele&Stationery
Ingxowa yefashoni ye tassel yesikhumba yokuhombisa ibhegi yokuhombisa enesiphatho sewristlet esivalwe yiziphu ecaba ezantsi ibhegi yomququzeleli ephantsi umthamo omkhulu wabasetyhini ababhinqileyo.
Umba NO. : 3223 ibhegi yokuthambisa
Ubungakanani: 210 * 150 * 85MM
20 GP Ubukhulu: 14444PCS
Le ngxowa yokuthambisa yeCa-Mei yenzelwe ukugcina nokulungelelanisa ibhrashi, iilipstick, isikere, imascara, iperfume kunye nezinye izixhobo zokuthambisa. I-zipper ihamba kakuhle, kunye nePUngethwathwaizinto eziphathekayo zintle kodwa azininzi. Uyilo lweTassel kunye nombala, iipogi ezincinci ezifanelekileyo kubantu bayo yonke iminyaka. Iguquguqukayo kwaye inemisebenzi emininzi, ingasetyenziswa njengeengxowa eziphetheyo, iikesi zeglasi kunye neebhegi zoncedo, ezihlangabezana neemfuno zakho ngowona mgangatho uphezulu.
Le bhegi yobuhle yobuhle ibanzi kwaye ilingana nezixhobo zokuhamba, izimonyo, izinto zokuthambisa, iibrashi, kunye nazo zonke ezinye izinto zobuhle ozifunayo. Inomphantsi osicaba oyenza ikwazi ukuhlala lula kwikhawuntara okanye kwisinxibo.
Umgangatho ophezulu-Yenziwe nge-PU eyomeleleyo, enganxibiyo ngethwathwa izinto zibonelela ngokhuseleko olukhulu eluthulini, imikrwelo kunye namaqhuma.
Ixabiso elikhulu-Imilinganiselo: 210 * 150 * 85MM, imilo yoxande. Icwecwe xa izip, ingena lula kwibhegi yakho yesikolo, ubhaka kunye nebhegi emfutshane. Ngexabiso elikhulu, iza neepokotho ezi-1 ezinkulu zeziphu kwaye unokubona ngokulula kwizinto zakho zokubhala kunye nezixhobo.
Uyilo olunesitayile-Imbonakalo epheleleyo yokuprinta kweholographic, ukwenza ngokwezifiso iimfuno zakho. Umsebenzi ogqwesileyo kunye noyilo olusebenzayo, olubambekayo, oluphathekayo, ubunzima obulula kodwa bomelele. Ukuthungwa okuqinisiweyo kwandisa ukuqina kweepencil case.
Umthamo omkhulu-Igumbi ngenene ngaphakathi, lilungele ibrashi, iingqekembe, izitshixo, izithambiso, izixhobo zokuzenzela kunye nezinye izinto ezincinci. Akukho frills okanye iipokotho ezingeyomfuneko kwi-slim stationary case, elula kodwa esebenzayo.
IiZippers ezigudileyo-Yahlula-hlula into yakho kwaye uthintele i-zipper ekuvulekeni kunye nezinto zokubhala ziwe phantsi kwibhegi ye-zipper. Tsala ngobunono i-zipper puller xa uvula iziphu kakuhle. Ukuvalwa kweziphu esemgangathweni, kulula ukuyivula nokuvala.
Imibala eyahlukeneyo- Sinemibala emi-2 eyahlukeneyo yokukhetha kuyo (eyohlukeneyo, okanye emdaka, ebhlowu) ke hamba, ukhethe owuthandayo kwaye uphathe ilizwe lakho kulonwabo oludlamkileyo!
Imisebenzi emininzi- Ilungele ukugcina iingqekembe zemali, kunye nezinye izincedisi, nazo zinokusetyenziswa njengeengxowa zepensile, ibhegi yefayile, ingxowa yomququzeleli.
Ngaphambili: I-Cute mini 3D i-unicorn glitter ye-PVC ubhaka enesiphatho sokubamba esinokuvalwa kwe-zipper enemitya ephindwe kabini ehlengahlengiswayo umthamo omkhulu wabantwana abakwishumi elivisayo abadala ukuya kuthenga esikolweni.
Okulandelayo: Ubhaka ocacileyo we-3D we-unicorn we-PVC ovaliweyo kunye nemitya ephindwe kabini ehlengahlengiswayo umthamo omkhulu wabantwana abakwishumi elivisayo ukuba bathenge umsebenzi wesikolo.
ingxowa yomququzeleli ophantsi osicaba
Ipateni ekhazimlayo yenkwenkwezi ekhazimlayo yesikhumba yePVC yokuthambisa...
Ipateni yentyatyambo eluhlaza ephathwayo yoshicilelo lwepolyeste...
Imizobo enemibala eqaqambileyo yepateni yokuhombisa...
Iqokobhe imilo PU ngesikhumba epheleleyo holographic printin...
Ushicilelo olumangalisayo lweholographic enemibala eqaqambileyo...